I-LG G4, inketho ethokozisayo ngaphakathi kwebanga eliphakeme | Izindaba zamagajethi
Ngemuva kokuphumelela kwe-LG G3, i-LG isungule kabusha idivayisi entsha yeselula ebiyisebenzisa njenge LG G4 futhi lapho igcine khona ukwakheka okuthole ihlombe elikhulu cishe kubo bonke abasebenzisi, futhi kuthuthukisa izinzuzo nokucaciswa. Ngale LG G4 sibhekene ne- ukuphela okuthakazelisayo kobubanzi obuphakeme, okungenzeka kungabi nemininingwane ethile yokuncintisana ngokwesibonelo ne-Samsung Galaxy S6 Edge lokho sikuhlaziye ngokujulile ezinsukwini ezimbalwa ezedlule.
Namuhla futhi sibonga i-LG Spain sizokwazi ukuhlaziya ngokuningiliziwe le LG G4 entsha futhi sifinyelele eziphethweni ngemuva kokuyisebenzisa izinsuku ezimbalwa njengeselula yomuntu siqu, isipiliyoni ebengijabule ngaso impela, yize ngicabanga ukuthi bengingathanda ungalokothi uyithenge.emininingwane ehlukahlukene. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ziyini? Ungaqhubeka ufunde kuze kube sekupheleni futhi ngokuqinisekile uzovumelana nami.
4 Ikhamera, ingenye yamandla yale LG G4
5 Ibhethri, iphuzu elimnyama elimnyama
6 Okuhlangenwe nakho kwami ​​ngemuva kwenyanga yokusebenzisa
7 Ukutholakala kanye namanani
Njengenjwayelo sizoqala ngokubheka ukwakheka kwale smartphone, ephumelela kakhulu, kepha enephuzu elibi. Futhi kungukuthi uma sibheka akukho ukuphela okuncintisanayo, kwalokho okubizwa ngokuthi ukuphela okuphezulu, okuqediwe ngoplastiki. Iningi lisebenzisa izinto ezisansimbi kanti ezinye zisebenzisa nengilazi. Enguqulweni eyisisekelo kunazo zonke kufanele sixazulule ipulasitiki nayo enganiki mqondo wokuthi iba enye into, ungabona kude ukuthi ipulasitiki.
Kule nguqulo ikhava yangemuva eyenziwe ngesikhumba, izinto ziba ngcono kakhulu, kepha ngaphandle kokuba yilutho lomunye umhlaba kanye nepulasitiki isekhona kakhulu. Futhi lapho sikhokha inani elithile lemali le-smartphone, esingakufuni ukuthi iqedwe ngoplastiki.
Okunye ukuklanywa kufana ku-LG G3 ukwakheka okubonwa kancane, futhi lokho Ngeke sithole noma iyiphi inkinobho ezinhlangothini zedivayisi, futhi konke lokhu kugxilwe ngemuva, into entofontofo impela nje lapho uyijwayela. Ngaphambili, cishe yonke into iyisikrini, esinamamaki amancane kakhulu.
Uma bekufanele sinikeze umklamo amaphuzu asuka ku-0 aye ku-10, bengizowunikeza u-6, ngilahle amamaki amaningi ngezinto ezisetshenzisiwe nangejika lekhava yangemuva, engingasoze ngayiqonda futhi eyenza i-terminal sway ngaso sonke isikhathi uma usibeka phezulu.
Lapha sikukhombisa izici eziyinhloko nokucaciswa kwale LG G4;
Ubukhulu: 148 × 76,1 × 9,8 mm
Isikrini: 5,5 amayintshi IPS ngesinqumo samaphikseli angama-1440 × 2560
Iprosesa: I-Snapdragon 808, i-Six Core 1,8GHz, i-64-bit
Imemori ye-RAM: I-3GB
Isitoreji sangaphakathi: 32GB njengethuba lokukhulisa usebenzisa amakhadi we-MicroSD
Amakhamera: 16 megapixel ngemuva nge-laser auto-focus, i-OIS 2 f / 1.8. Ikhamera engaphambili eyi-8 megapixel
Ibhetri: 3.000 mAh
Uhlelo Lokusebenza: I-Android Lollipop 5.1
Ungahlola ezinye izici nokucaciswa kufayela le-LG G4 esingakuthola kuwebhusayithi esemthethweni ye-LG ongayithola kusixhumanisi esikushiyele sona ekugcineni kwalesi sihloko.
Ngaphakathi kwale LG G4 sithola iprosesa I-Snapdragon 808, esingayibiza ngokuthi umugqa wesibili nokuthi akuyona imodeli yakamuva yenkampani yeQualcomm nokuthi ngokwesibonelo uma siseHTC One M9.
Asifuni ukusola iprosesa, kepha Yebo, siqaphele ukuthi kwesinye isikhathi lesi siginali siyaxhunywa, yize kufanele kucatshangwe ukuthi i-LG isivele isebenza ukuxazulula lesi sici ngokubuyekezwa kwesoftware ethile okufanele itholakale maduzane.
Noma ngabe kukhona konke, ungakhathazeki ngale mininingwane emincane, ngoba uma uzoyisebenzisa ngokujwayelekile, ngaphandle kokukhama le LG G4 emikhawulweni engalindelekile, ngeke uqaphele inkinga noma i-lag.
Imemori ye-RAM ingesinye sezizathu zokuthi akekho umsebenzisi "ojwayelekile" ozobona noma yini exakile nokuthi i-3GB yayo ye-RAM ikwazi cishe yonke into.
Ngokuphathelene nokugcinwa kwangaphakathi, sithola inguqulo eyodwa ye-32GB, nokho, enganwebeka kusetshenziswa amakhadi we-MicroSD, okuseseyinzuzo enkulu ngoba, ngaphandle kokuthi okwamanje, kunezinguqulo eziningi ezinesitoreji sangaphakathi esiphakeme lokhu engingaba yikho inkinga yabanye abasebenzisi.
Ikhamera, ingenye yamandla yale LG G4
Uma iprosesa ingenye yamabala amnyama ale LG G4, Ikhamera yayo ngokungangabazeki ingenye yamandla alesi siginali futhi esingasho ukuthi ibalwa njengehamba phambili emakethe kanye naleyo ye-Samsung Galaxy S6.
Ukusebenziseka, amathuba wokwenza ngokwezifiso, ubukhali okusinikeza bona, ukusimama kwezithombe noma ukugxila kwe-ultra-fast ngamanye amaphuzu amahle aleli khamera. Ngaphezu kwalokho, ithuba lokusebenzisa ikhamera ngemodi yezandla yinto esingenakuphuthelwa futhi kuzoba yisibusiso sangempela kubasebenzisi abaningi abangatholi lokhu kungenzeka kwamanye amadivayisi eselula emakethe.
Kumele futhi sigcizelele ukuthi izithombe ezithwetshulwe ebumnyameni obugcwele noma ngokukhanya okuncane kakhulu zinekhwalithi enkulu futhi ngaphezu kwakho konke singasho ukuthi ziveza imibala yangempela, kude kakhulu nezinye ezitholakala namanye amatheminali emakethe futhi ezenza isithombe akubukeki njengeqiniso nhlobo.
Lapha sikukhombisa ifayili le- igalari ebanzi yezithombe ezithathwe nge-LG G4;
Ibhethri, iphuzu elimnyama elimnyama
Ngaphandle kokuthi i-LG iphindaphinde izikhathi eziyinkulungwane ukuthi ibhethri akuyona inkinga kule LG G4, Okuhlangenwe nakho kwethu bekuhluke ngokuphelele futhi kungukuthi sibe nezikhathi ezimbi, izinsuku ezimbalwa ukufinyelela ekupheleni kosuku, kanye nasekusebenziseni ngokweqile esigungwini.
I-Los 3.000 mah Ibhethri layo libonakala ngathi linokwanela, kepha ngaphandle kokuthi umsebenzisi "abe nolaka kakhulu" ngamatheminali, noma afake ngokwesibonelo izinhlelo eziningi kakhulu kimi azinjalo. Futhi ngicabanga ukuthi akuzona ezanoma ngubani, ngoba lapho i-LG ikuvumela ukuthi ushintshe ibhethri noma kunini lapho sifuna khona kungenxa yokuthi kungenzeka ukuthi kusatshwa ukuthi le LG G4 izokwenzeka ngendlela efanayo naleyo eyandulela yona eyasebenzisa ibhethri ngokuqhubekayo.
Vele, kulungile ukugcizelela lokho Le LG G4 isinikeza ithuba lokuthi ikhokhiswe ngokushesha futhi isikhathi esisithathayo ukushaja ngokugcwele i-terminal sincane, okuyisibusiso ngoba uma ngaphezu kwebhethri liphela maduzane, ngeke ibe nomsebenzi walo mfana, kungaba ukuthukuthela kakhulu.
Okuhlangenwe nakho kwami ​​ngemuva kwenyanga yokusebenzisa
Njengoba sengivele ngikutshele kuvidiyo ehola le ndatshana, i-LG G4 ibiyi-smartphone yami engizisebenzisela yona inyanga yonke futhi yize kunamaphuzu amaningi amabi okufanele ngiwagqamise, ulwazi lube luhle kakhulu futhi luhle, futhi uma bekufanele ngikhethe umakhalekhukhwini kulokho okubizwa ngokuthi kusezingeni eliphezulu, mhlawumbe i-LG flagship ibizoba yisinqumo sami sokuqala.
Phakathi kwamaphuzu amahle kufanele ngigqamise ikhamera ngaphezu kwakho konke, nokuthi lokho kusinikeza ithuba lokuthatha izithombe zekhwalithi enkulu kakhulu, ngenzuzo yokuthi singasebenzisa ikhamera kwimodi yezandla, okuyisibusiso sangempela, inqobo nje njengoba wazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani, okungelula.
La isikrini, okusinikeza ubukhali obukhulu nemibala yangempela kakhulu kungenye yezinto ezivelele zale LG G4. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukukhipha ibhethri, lapho kunesidingo sokuyishintshela entsha, nokwandisa isitoreji sangaphakathi ngekhadi le-MicroSD elizungeze izindaba ezinhle.
. Eyokuqala ibhethri layo, elicace bha ukuthi alanele itheminali esezingeni eliphezulu, futhi lokho ngukuthi ngenkathi useholidini, lapho kungenawo ama-imeyili amaningi kangaka asebenzayo futhi ngokuvamile, okungenani kimi ngisebenzisa i-smartphone encane, ayizange fika ekupheleni kosuku.
Ukwakheka kwayo kungenye into engingayithandanga nhlobo nokuthi ngisaqonda ukuthi ukugobeka emuva kwesiginali okuyenza igingqike lapho ibekwa endaweni eyisicaba.
Ukutholakala kanye namanani
I-LG G4 itholakale emakethe amasonto ambalwa manje, ngentengo engahluka ngokuya ngekhava yangemuva esiyifunayo. Ngezansi sikukhombisa izixhumanisi ongazithenga ku-Amazon kanye nezintengo zazo zamanje;
I-LG G4 Titanium - ama-euro angama-530 I-LG G4 Red - ama-euro angama-575 I-LG G4 Emnyama - ama-euro angama-579
Gcina engqondweni ngaphambi kokuthenga lesi sikhumulo ukuthi izinkampani eziningi nezitolo zikunikeza kanye nesipho, ngakho-ke isincomo sethu ukuthi useshe inethiwekhi kahle ngalezo zitolo ezizosivuza ngesipho, ezimweni eziningi okungaphezulu kakhulu kwalokho umbhedo nje.
Ucabangani ngale LG G4?.
Ukuboniswa kwekhwalithi ephezulu
Ikhamera yesithombe esinikeza izithombe zekhwalithi enkulu kakhulu
Izinto zokwakha nokuklama okusetshenzisiwe
Iprosesa iphelelwe yisikhathi
Imininingwane engaphezulu - lg.com
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-LG G4, inketho ethokozisayo ngaphakathi kwebanga eliphakeme
I-Level U Wireless Bluetooth Headset, ama-headphone amaningi e-Samsung